Budata House Flipper maka Windows
Budata House Flipper
Free Budata maka Windows (119.00 MB)
Budata House Flipper,
House Flipper bụ egwuregwu egwuregwu ụlọ kachasị egwuri egwu na ekwentị mkpanaaka (Android APK na iOS) na ikpo okwu PC. Nime egwuregwu ịme anwansị a ma ama, ị zụrụ ụlọ, rụkwaa ya, meziwanye ụlọ ndị mebiri emebi. You ga-etinyezi ya maka ọrịre. Ọtụtụ ọrụ na-echere gị na Flipper House, egwuregwu nke iwu ụlọ, ịmepụta, ire ụlọ. Flipper House dị na Steam!
Download Flọ Flipper
Mmemme ndozi ụlọ gosipụtara na channelụ TV dị ebe a na House Flipper na usoro egwuregwu. Are bụ otu nwoke otu. Na-azụta ụlọ ochie, nke ruru unyi, nke mebiri emebi, rụzigharị ma debe ha maka ire ere. Have nwere ngwa ọrụ niile ị ga - achọ mgbe ị rụzigharị ụlọ. You banye nime ụlọ, a na-egosi ime ụlọ na ebe ikwesigharị imegharị ahụ bụ ọrụ. Na-arụ ụdị nrụzi na nrụzigharị niile. Ka ị na-arụzu ọrụ ndị ọzọ, akpọchiri ihe ọhụụ ga - eme ka ụlọ gị baa uru. Ebumnuche ndị ahụ esighi ike ma enweghị oge, mana ị gaghị enwe ike ịga nihu nenweghị ọrụ ọzọ. Site nụzọ, ị nwere mmasị nime ụlọ nke ụlọ, ya bụ, ime ụlọ.
House Flipper bụ ahụmịhe pụrụ iche maka gị ka ị bụrụ otu nwoke na-emezigharị otu. Zụta, mezie ma melite ụlọ ndị mebiri emebi ma ree ha uru!
Ihe ndị ị ga - eji ga - abụ ngwaọrụ. Jiri ha na ihe ị ga-eme hama, akuakuzinwo, Polish na ịghasa, nakwa dị ka ihe na-ruo eruo, idozi ma ọ bụ ọcha.
Nwee ahụmịhe ime ụlọ na ụdị ịchọ mma ị hụrụ nanya. Chepụta ma tinye ụlọ gị ọtụtụ narị ihe dị iche iche ịhọrọ site na nnwere onwe. Gosi talent gị!
Love hụrụ ime ụlọ nanya ma chọọ ijupụta ime ụlọ na ụdị ọkacha mmasị gị? Nwere ike ịzụta ụlọ efu ma chọọ ya mma. Ì chere na ọ bụ naanị ndị injinia na-aghọta ihe ndị dị otú ahụ? Nwere ike ilekwasị anya na ndozi na mgbakọ. You bụ ọkachamara na Obere omume weta nnukwu mgbanwe echiche? Nwere ike ịzụta ụlọ dị ọnụ ala ma mee ka ọ maa mma na ụfọdụ mgbakwunye mgbakwunye na mmezi ndị ọzọ.
Ebumnuche bụ isi nke azụmaahịa ụlọ ụlọ bụ iji nweta uru. Like na-achọ itinye ndụ gị nihe egwu? Kedu maka itinye ego? Gbakọọ uru gị ma chọpụta ọghọm / ụgwọ ọrụ kachasị mma maka gị.
Brolọ ahịa ụlọ ahịa na-achọ ihe dị ukwuu. Zụlite ma mee ka nkà gị dịkwuo nkọ. Nweta ngwaọrụ ndị ka mma. Nweta ego iji bulie itinye ego gị ma mepee mmepe site na itinye usoro ọhụụ. Nwee anụrị!
Flọ Flipper System chọrọ
Akụrụngwa PC gị ga - egwu bụ House Flipper edepụtara nokpuru. Echefula na ị ga-enwe ike igwu egwuregwu ahụ na ntọala kachasị ala na kọmputa gị nke na-ezute opekempe usoro chọrọ, yana ị nwere ike igwu egwuregwu ahụ nke ọma, na-enweghị oyi ma ọ bụ na-asụ nsị na kọmputa gị nke na-ezute usoro usoro akwadoro. Flọ Flipper PC usoro chọrọ;
Sistemụ nrụọrụ: Windows 7 64-Bit ma ọ bụ karịa
Ebe nchekwa: 4GB Ram
Kaadị vidiyo: Nvidia GeForce GTX 560 / AMD R7-260X
Ohere: 6GB nefu
Sistemụ nrụọrụ: Windows 10 64-Bit
Kaadị vidiyo: Nvidia GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX 580
House Flipper Ụdịdị
Nha faịlụ: 119.00 MB
House Flipper bụ egwuregwu egwuregwu ụlọ kachasị egwuri egwu na ekwentị mkpanaaka (Android APK na...
Warplane Inc. bụ egwuregwu egwuregwu 2D nke ndị egwuregwu na-amụ banyere akụkọ akụkọ agha, akụkọ...
World of Tanks, nke gbasara Agha Worldwa nke Abụọ, meriri onyinye a na ụdị egwuregwu egwuregwu nke...
The Sims 4 bụ egwuregwu ikpeazụ nke Electronic Arts ama egwuregwu ịme anwansị egwuregwu Sims. Sims...
Euro Truck Simulator 2 bụ ngwongwo ụgbọala, egwuregwu simulator nke na-adọta uche na ụzọ ya. Nwere...